राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्नुभएन : पूर्वराष्ट्रपति यादव
२०७७ फाल्गुण ७ गते १७:४१ बजे प्रकाशित
जनकपुरधाम – पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको रक्षा नगरेको गुनासो गरेका छन् ।
शोभाकर पराजुलीद्वारा लिखित समाजवाद र वीपी कोइराला तथा वीपी विचार संग्रह पुस्तकको जनकपुरधाममा लोकार्पण गर्दै डा. यादवले भने, ‘राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्नुभएन । रक्षा गर्नुभएन ।’
प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले दलभित्रको विवादले संसद विघटन गर्न नहुने भन्दै रोक्नुपर्ने डा. यादवले बताए ।
‘तपाईं आफ्नो दलभित्रको विवाद समाधान गर्नुस् र, समाधान भएन भने सदनमा जानुस् । अरु दलसँग सहमति लिनुस् । अरु दलले साथ दिन्छ भने सरकार चलाउनुस । नभए अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नुस् । र संविधानको स्टेप अनुसार जानुस् भन्नुपर्थ्यो’ डा. यादवले भने ।
चुनाव गराउने नाममा संविधानलाई भुटेर खाने कि संविधानलाई बचाउने ?’ उनले प्रश्न गरे ‘भोलि संसद पुनर्स्थापना नभए देश कुन बाटोमा जान्छ यो विद्धानहरुलाई सोधुँला, त्यो म भन्न सक्दिनँ ।’
लोकतन्त्रमा फेरि एक पटक ग्रहण लागेको बताउँदै उनले लोकतन्त्रलाई बचाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
अन्तिम अपडेट : २०७७ फाल्गुण ७ गते १७:४१ बजे